TSY FIVORIAN’NY LOHOLONA… : « Tsy tokony ho sakana ny olana ara-bola », hoy ny Filohan’ny HCC – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 1:24
Nanao fanambarana i Jean Eric Rakotoarisoa omaly.
Accueil/Politika/TSY FIVORIAN’NY LOHOLONA… : « Tsy tokony ho sakana ny olana ara-bola », hoy ny Filohan’ny HCC
TSY FIVORIAN’NY LOHOLONA… : « Tsy tokony ho sakana ny olana ara-bola », hoy ny Filohan’ny HCC
Naneho ny heviny mahakasika ny raharaham-pirenena ny Filohan’ny Fitsarana Avo Momba ny Lalàmpanorenana omaly. Noresahany manokana tamin’izany ny mahakasika ireo Loholon’I Madagasikara izay tsy tonga manatanteraka fivoriana amin’izao ankatoky ny fivoriana ara-potoana izao, noho ny resaka vola. Nitsotra ny Filohan’ny HCC fa tsy tokony ho lafiny ara-bola mihitsy no hatao sakana tsy hanatanterahana fivoriana ara-potoana, izay efa voafaritry ny lalàna.
Lucien R. 14 novembre 2020
Mivory indroa isan-taona ny antenimiera roa tonta, araka ny voalazan’ny andininy ao amin’ny Lalàmpanorenana malagasy. Tafiditra ao anatin’izany na ny Antenimierampirenena na ny Antenimierandoholona. Araka izany, “tokony ho mivory sy manao ny asany avokoa ireo senatera sy Solombavambahoaka, izany rahateo no nandanian’ny mpifidy azy ireo ”, hoy ny Jean Eric Rakotoarisoa, Filohan’ny HCC. Mahakasika ny filazan-dRivo Rakotovao sy ny ekipany momba ny olana ara-bola, izay tsy hahafahana manatanteraka fivoriana, nilaza ny Filohan’ny HCC fa tsy tokony hatao sakana mihitsy izany raha amin’ny fotoam-pivorian’ny parlemantera tahaka izao.
“Izahay koa mba nanana olana tahaka izany tamin’ny fifidianana ho Filoham-pirenena. Fa izahay anefa tsy niteny mihitsy na dia indray mandeha aza hoe izahay tsy hanao fifidianana satria tsy tonga ny volanay. Tokony mba hojerena ihany hoe raharaham-pirenena no hatao fa tsy zavatra hafa. Izahay tsy mbola nanao “chantage” na tamin’iza na iza”, io no fanazavan’i Jean Eric Rakotoarisoa raha naneho ny heviny izy. Fotoana izay nanindriany fa tsy ny Antenimierandoholona ihany no misedra izany olana izany fa na ny Antenimierampirenena koa aza. Dikany, finiavana politika hampikatso ny raharaham-pirenena ny an’ireo Senatera, fa tsy misy fijerena izay mahasoa ny firenena.
Tsy mitanila ny HCC
Ny fanehoan-kevitra sy ny fanapahana rehetra avoakan’ny Fitsarana Avo Momba ny Lalàmpanorenana dia mifototra amin’izay voalazan’ny Lalàmpanorenana avokoa, hoy ny nambaran’I Jean Eric Rakotoarisoa. Ny akon’ny fanapahan-kevitra, hoy izy, tsy maintsy misy fiantraikany amin’ny resaka politika foana. Ity tompon’andraikitra ity izay niantso fifanajana hatrany eo amin’ny mpisehatra politika rehetra eto Madagasikara, na dia eo aza ny fahasamihafana sy ny tsy fitovian-kevitra ara-politika.
“Ny Lalàmpanorenana no jerena, fa adidinay koa ny miaro ny firenena tsy hikorontana”, hoy ny fanazavany. “Tsy natao hiaro ny fitondrana izahay, fa voasoratra ao anaty lalàmpanorenana ny anjara asanay. Tsy maintsy mahazo fitsikerana foana ny HCC na inona na inona atao, na avy amin’ny Fanjakana na avy amin’ny fanoherana”, hoy izy. Entina hilazana fa tsy mitombona ny fanambaran’ny avy amin’ny fanoherana fa miandany amin’ny Fanjakana na iharan’ny tsindry avy amin’ny Fitondram-panjakana ankehitriny ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana.
FIOMANANA AMIN’NY FISOKAFAN’NY SISIN-TANY : Efa mivory tsy tapaka ireo mpisehatra voakasika rehetra
FAMPODIANANA AN-TANINDRAZANA: Natoka-monina avokoa ireo mpandeha tonga farany teto Madagasikara
FETIN’NY MOZIKA 2021: Nahavita dingana ny Minisitera ho fametrahana ny satan’ny mpanakanto
FITOKONAN’NY PARAMEDY: Hetsika tsy ara-dalàna, mamofompofona resaka politika
DISTRIKAN’AMBATOFINANDRAHANA Olona enina nitrandraka vato, indray maty nihotsahan’ny tany